Sex | Narinepal | Page 2
“बढी चिच्याउँदा यौनमा चरम सुख प्राप्त हुन्छ”
नेपाली समाज यौनमा अझै खुलिसकेको छैन । यौनसम्बन्धि जिज्ञासा नेपाली युवायुवतिदेखि वयस्कहरुले लुकीलुकि मेट्नेगर्छन, यौनका सम्बन्धमा रचिएका लेखहरु पढ्नेदेखि लिएर, यौन समस्या समाधानबारे लेखिएका टिप्पणीहरु उनीहरु सकभर एक्लै अध्ययन गर्न मन पराउँछन् । तर यौन प्राकृतिक आवश्यकता मात्रै नभएर स्वास्थ्यको स्वस्थतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले यसको चर्चा नेपालमा विस्तारै खुल्ला ढंगले गर्न थालिएको छ ।
यौन जीवनमा नास्तिक व्यक्तिहरू बढी भाग्यमानी
यौनसम्पर्कको आनन्द उठाउने मामिलामा धार्मिक व्यक्तिहरूभन्दा नास्तिक व्यक्तिहरू बढी भाग्यमानी हुन्छन् । नास्तिककै यौनजीवन तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुन्छ । अनुसन्धाताहरू यस्तै दाबी गर्छन् । धार्मिक मनोवृत्तिका व्यक्तिहरू यौनको समय प्रयोग गर्नबाट हच्किन्छन् रे, । अनुसन्धाताहरू भन्छन्, ‘धार्मिक व्यक्तिहरू सुरुमा त यौनको नाम सुन्नासाथ हच्किएजस्तो गर्छन् । सहवासको नयाँ विधि प्रयोग गरेर मन लगाउन खोजे पनि उनीहरूको मस्तिष्कबाट पापधर्मको कुरा हट्दैन र यौनसम्पर्क गरिहाले पनि पछि अपसोस जनाउँछन् ।’
यौन मानवजीवनको आवश्यकता हो । यौनविनाको संसारको परिकल्पना गर्न सकिन्न । वंश निरन्तरता र आपसी प्रेमलाई गाढा बनाउने काम यौनले गर्दछ । इच्छाविपरीत गरिएको यौन सम्पर्क बलात्कार हो । आज हामी यौन दुव्र्यवहार र सम्बन्धित कानुनको बारेमा चर्चा गर्दैछौं ।
यौन दुव्र्यवहारका प्रकारहरु
क) प्राकृतिक यौन दुव्र्यवहारः यसअन्तर्गत जबर्जस्ती करणी (च्बउभ), हाडनाता करणी (क्ष्लअभकत) र अडल्ट्री आदि पर्दछन् ।
ख) अप्राकृतिक यौन दुव्र्यवहारः यसअन्तर्गत सोडोमी, बेस्तीयालिटी, बकल, कोइटल लेस्बियानिजम आदि पर्दछन् ।
यही नै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था नभए पनि अहिले शीघ्र स्खलनको मूल कारण मानसिक नै भएको पाइन्छ। कतिपय मानिसमा यौ नसम्पर्क वा क्रियाकलापमा ‘राम्रो’ गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको कारण हुनसक्छ।
किन्सेले गरेका प्रसिद्ध अध्ययनमा योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराएको दुई मिनेटभित्रै ७५ प्रतिशत पुरुषको चरमसुख पाएको देखिएको थियो। शीघ्र स्खलनलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरामा वैज्ञानिकहरूबीच बहस पनि नभएको होइन। ३० सेकेन्डमै वा एक मिनेटभन्दा कम समयमा वा ५ देखि १० धक्कामै वीर्यस्खलन भए छिटो स्खलन भएको भनेर परिभाषित गर्ने प्रयास भए पनि अहिले आफू तथा आफ्नो यौनजोडीले चाहेको समयभन्दा निरन्तर रूपमा चाँडो वीर्यस्खलन भए त्यसलाई छिटो वीर्यस्खलन भएको स्थिति अर्थात् शीघ्रस्खलन मान्न थालिएको छ। यौनसम्पर्कलाई कति समय लम्ब्याउने भन्ने कुरा यौन जोडीमा भर पर्छ। महिलालाई चरमसुखको स्थितिसम्म पुग्न केही बढी समयलाग्न सक्छ, त्यसैले पुरुषले लिङ्ग प्रवेश गराएर यौनसम्पर्क सुरु गर्नुभन्दा पहिले पर्याप्त मात्रामा पाक्क्रीडामा संलग्न हुन सके सहयोग पुग्छ।
शीला शर्मा (नाम परिवर्तन) वर्ष २९, सरासर एउटा औषधि पसलमा आइन् । उनले आकस्मिक गर्भनिरोधमा खाइने औषधिको अनुरोध गरिन् । औषधि पसलेले केही औषधि दिए । उनीसँग जानकारी लिँदा साउदीबाट फर्केका श्रीमान्सँग उनको असुरक्षित यौन सम्पर्क भयो दुई दिन अगाडि । उनी गर्भ रहन गयो होला भनेर चिन्तित देखिन्छन्, किनकि उनको तेस्रो सन्तान ५ वर्षको भइसकेको रहेछ । अर्थात् उनलाई बच्चा जन्माउन मन रहेनछ ।
सिम्रिका अधिकारी (नाम परिवर्तन) वर्ष १७, कलेजको ड्रेसमा नै औषधि पसलतिर गइन् । सडकमा रोकिएको बाइकमा एकजना युवा उनलाई कुरिरहेका थिए । उनी पनि सिम्रिकाकै जस्तो ड्रेसमा देखिन्थे । उनले आएर ‘इकोन’ मागिन् । उनीसँग बुझ्दा व्वाइफ्रेण्डसँग उनको असुरक्षित यौनसम्पर्क भएको तीन दिन पुगेछ ।
यी दुई प्रतिनिधि पात्र, जो आकस्मिक गर्भनिरोधका साधनको प्रयोगका लागि औषधि पसलमा आए । यस्ता अरु धेरै महिला, पुरुषहरु हिजोआज बढ्दोरुपमा इमरजेन्सी कन्ट्रयाप्सनका लागि प्रयोग हुने औषधि माग्न थालेका छन् ।
यसरी गर्नुस बिहानी सहवासको तयारी !
यी तपसीलका तरीकाहरु अपनाएर आफ्नो बिहानी सहवास मर्निङ सेक्स आनन्ददायक गराउन सक्नु हुन्छ । एका सर्वेक्षणका अनुासार महिलाहरुको तुलनामा पुरुषहरु बिहानी सहवासमा ज्यादा रुचि लिन्छन् । त्यस्ता महिलाहरुको संख्या एकदमै थोरै छ जस्लाई बिहान उठदासाथ सहवासको चाहना राख्छन् । यस्ता joleen1पत्नीहरु भएका पुरुषहरुलाई नमज्जाको अवसरबाट गुज्रनु पर्छ जब उनिहरु बिहान उठ्ने बित्तिकै सहवासको इच्छा गर्छन् तर उनकी सहयात्री यस चाहनाबाट तर्किन खोज्छिन् । आउननुस हामी तपाईको लागि केहि तरीकाहरुसंग परिचित गराउछौं जस्लाई अपनाएर तपाईले आफ्नो सहयात्री पार्टनरलाई बिहानी सहवासका लागि तयार गराउन सक्नुहुन्छ ।
यसरी पूर्ण हुन्छ सम्भोग क्रिया !
एजेन्सी/ स्त्री–पुरुष आपसमा नजर जुध्न थालेपछि स्त्रीमा डर र संकोच हटेर जान थाल्छ र उनी विस्तारें–विस्तारै निर्धक्क रुपमा हाँस्ने, ठट्टा गर्न थाल्ने छिन् । आँखाको भावद्वारा उनको चेतना मनमा काम भावनाका तरङ्गहरु उत्पन्न हुन थाल्छन् ।
विस्तारै कुनै बहाना बनाएर उनका हात समाउने चेष्टा गर्नु पर्दछ यसबेला उनको मुखाकृतिमा कस्ता भाव उत्पन्न हुन्छ यसलाई पुरुषले धेरै विचार गर्नु पर्दछ । उनी हाँसिन् र रोमाञ्चक भावमा वार्तालाई अरु अगाड बढाइन् भने तपाई पनि अगाडि बढ्नोस् र उनको पिँडुवादेखि टाउकोसम्म हातले स्पर्श गर्नुस् । यसले स्त्रीको शरीरमा एक प्रकारको विद्युतीय तरङ्ग उत्पन्न गर्दछ । जस्तो कुनै युवतीले हाम्रो शरीरमा छुँदा छिरिङ्ग हुन्छ, त्यस्तै हो । यसपछि उनको मनमा काम चाहनाको टुसा उम्रन शुरु गर्दछ ।
गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क राख्न उचित कि अनुचित
गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क राख्न उचित कि अनुचित ? थाहा नभएर दम्पतीहरू चिन्तामा पर्ने गर्छन् । त्यसमाथि हाम्रो समाजमा दम्पतीबीच नै पनि यौनबारे खुलेर कुरा गर्ने चलन पाइँदैन । चिकित्सककै अगाडि पुगे पनि कतिपय दम्पती खुलेर समस्या राख्न सकिराखेका हुँदैनन् । चिकित्सकले पनि प्रस्टसँग कुरा राख्न नसकेको हुन सक्छ । गर्भावस्थाका बेला महिलाको शारीरिक असहजता, अनुहारमा आउने परिवर्तनसँगै गर्भमा रहेको बच्चालाई हानि पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ताले यौनजीवन प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । यस किसिमको मनोवैज्ञानिक असरले दम्पतीले यौनसम्बन्धको आनन्द त लिन पाउँदैनन् नै, दाम्पत्य सम्बन्धमा एक्लोपनको अनुभूति गराइदिन सक्छ ।